Soo dejisan TrueCrypt 7.2 – Vessoft
Programka sirta, Saxannada
Soo dejisan TrueCrypt
TrueCrypt – software a functional waayo sirta ah. software waa karin inuu abuuro isagoo saxannada Windows XP dalwaddii, taas oo loo isticmaali karaa drives sidii macquul ah in aad nidaamka. TrueCrypt awood si ay u abuuraan qoqobkii aamin ah, helitaanka taas oo waxaa la siiyaa marka aad qortaa erayga sirta ah ama furaha sirta kale. software waa ay awoodaan in ay sir macluumaad ku saabsan drives adag, drives flash, kaararka xusuusta iyo sidayaal kale xogta. TrueCrypt kuu ogolaanayaa inaad sir content ee file kasta iyo meel free isticmaalaya algorithms encryption kala duwan.
Abuuritaanka of a disk lo dalwaddii
Settings ee sirta ah ama furaha sirta kale
algorithms encryption xoogbadane
Sirta ah sidayaal xog kala duwan
Comments on TrueCrypt:
TrueCrypt Software la xiriira:
العربية, English, Français, Español... OpenVPN 2.3.12
العربية, English, Français, Español... KeePass 2.30 Professional iyo Portable; 1.29 Portable iyo Classic
English, Français, Español, Deutsch... MakeMKV 1.10.2
Saxannada fudud An in la isticmaalo software si loogu badalo content ee DVD iyo Blu-ray saxanno qaab MVK ah. software The dukaamada metadata iyo qaybaha macluumaadka ee disk ah.
English, Français, Español, Deutsch... Nero 2016 21.09.2015 Nero Burning ROM iyo 2016 17.09.2015 Classic
English, Français, Español, Deutsch... Folder Lock 7.6.1
Extensions deegaanka ayaa si ay u fuliyaan adeegyada web-aan la isticmaalayo browser ah. software The taageertaa shaqada ee codsiyada, ciyaaro iyo qalab si loo hagaajiyo waxqabadka.